ETU ESI TINYE TELEGRAM NA KỌMPUTA - TELEGRAM - 2019
Enwere ike ijikọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke kọmputa na otu netwọk mpaghara, nke ọ bụla nwere aha ya pụrụ iche. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi achọpụta aha a.
Chọpụta aha PC na netwọk
Anyị ga-atụle ma ngwaọrụ ngwaọrụ ndị dị na ndabara na nke ọ bụla nke Windows, na mmemme pụrụ iche.
Nzọụkwụ 1: Ngwá Ọrụ Pụrụ Iche
Enwere ọtụtụ mmemme na-enye gị ohere ịchọta aha na ozi ndị ọzọ gbasara kọmputa ejikọrọ na netwọk otu mpaghara. Anyị ga-atụle MyLanViewer - ngwanrọ na-enye gị ohere iṅomi njikọ netwọk.
Download MyLanViewer site na saịtị gọọmentị
Ibudata, wụnye ma mee ihe omume ahụ. Enwere ike iji ya n'efu n'efu ruo ụbọchị 15.
Pịa taabụ "Nyocha" na n'elu panel pịa bọtịnụ ahụ "Malite nyocha ngwa ngwa".
A ga-enye ndepụta nke adreesị. Na akara "Kọmputa gị" Pịa na akara ngosi ahụ.
Aha ị chọrọ bụ dị na ngọngọ ahụ "Aha onye ọbịa".
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịchọpụta ihe ndị ọzọ gbasara usoro ihe a.
Ị nwere ike ịchọpụta aha kọmputa na netwọk na-eji "Iwu iwu". Usoro a ga - eme ka ị gbakọọ ọ bụghị naanị aha PC, kamakwa ozi ndị ọzọ, dị ka njirimara ma ọ bụ adreesị IP.
Hụkwa: Otu esi achọpụta adreesị IP nke kọmputa ahụ
Site na menu "Malite" meghee "Iwu Iwu" ma ọ bụ "Windows PowerShell".
Mgbe aha njirimara, tinye iwu na-eso ma pịa "Tinye".
Ke kiet ke otu nkan "Njikọ Njikọ Obodo" chọta ma debe uru "Adreesị IPv4".
Ugbu a, tinye iwu na-esonụ na akara efu ma gbakwunye adreesị IP depụtara site na ohere.
A ga-enye gị aha kọmputa na netwọk mpaghara.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ site na iji iwu dị n'okpuru ebe a ma gbakwunye IP adreesị nke PC achọrọ na netwọk mgbe ọ gasịrị.
A na-etinye ozi dị mkpa na ngọngọ ahụ. "NetBIOS okpokoro nke ime kọmputa aha".
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma aha PC gị na netwọk, ị nwere ike ịkwụsị onwe gị na otu ndị ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro a, biko kpọtụrụ anyị na ihe ndị a.
Hụkwa: Otu esi achọpụta ID ID
Nzọụkwụ 3: Gbanwe aha
Ụzọ kachasị mfe maka ịgbakọ aha bụ ilele ihe onwunwe nke kọmputa ahụ. Iji mee nke a, jiri aka nri pịa bọtịnụ ahụ. "Malite" ma họrọ site na listi "Usoro".
Mgbe mepere windo ahụ "Usoro" ị ga-ahụ ozi ịchọrọ "Aha zuru oke".
N'ebe a ị nwekwara ike ịchọpụta data ndị ọzọ gbasara kọmputa ahụ, yana idezi ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Gụkwuo: Otu esi agbanwe koodu PC
Usoro ndị a tụlere n'isiokwu ahụ ga-eme ka ị chọpụta aha kọmputa ọ bụla na netwọk mpaghara. Na nke a, ụzọ nke abụọ kachasị mma, ebe ọ na-enye ohere ịgbakọ ozi ọzọ na-enweghị mkpa ka a wụnye ngwanrọ nke atọ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Telegram 2019